Fiovana amin'ny UPS Top Management | RayHaber | raillynews
HomeIZAO TONTOLO IZAOAMERIKA1 AmericaFiovan'ny fitantanana UPS ambony
25 / 03 / 2020 1 America, AMERIKA, IZAO TONTOLO IZAO, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems
fiovan'ny fitantanana ambony
UPS (NYSE: UPS) Filankevi-pitantanana dia nanambara fa tamin'ny 1 jona, i Carol Tomé dia notendrena ho Tale Jeneraly (CEO) UPS. David Abney, izay filohan'ny birao sy mpitantana foibe ankehitriny dia nambara ho filohan'ny birao mpitantana nanomboka ny 1 jona. Abney, izay hisotro ronono ao amin'ny Birao Talen'ny UPS amin'ny 30 septambra, dia hitohy amin'ny maha mpanolo-tsaina tsy miankina mandra-pahatongan'ny faran'ny taona 2020 mba hivezivezy tsara ny vanim-potoanan'ny tetezamita ary hamita am-pahombiazana ny vanim-potoana be; Amin'ny faran'ity vanim-potoana ity dia hisotro ronono izy amin'ny famitana ny asa rorany 46 taona amin'ny UPS. Tamin'ny 30 septambra, ny Lehiben'ny fahaleovantenan'ny UPS William Johnson dia hiasa ho Lehiben'ny Mpanatanteraka Mpanatanteraka.
Johnson, izay miasa ho filohan'ny Komitin'ny Governemanta UPS sy Mpikambana ao amin'ny Komitin'ny Governemanta ary mpikambana ao amin'ny Komity Mpanatanteraka, dia nilaza hoe: "Taorian'ny dingana fifidiana henjana nifanaovan'ireo kandida tao anatiny sy ivelan'ny orinasa dia nandray fanapahan-kevitra mazava tany Carol izahay. Amin'ny maha-mpitarika malaza indrindra sy manan-talenta azy amin'ny tontolon'ny mpandraharaha amerikana, i Carol dia voaporofo amin'ny fitarihana ny fitomboana manerantany, ny fanamafisana ny lanjan'ny stakeholder, ny fampandrosoana ny talenta ary ny fanatanterahana ny laharam-pahamehana.
"Carol, izay mpikambana sady Mpikambana ao amin'ny Birao Mpanolotsaina dia manana fahalalana lalina momba ny modely sy paikady ary mpiasa ho an'ny UPS, ary izy no tompon'andraikitra mendrika indrindra hitarika ny orinasa amin'ity dingana fanovana lehibe ity," hoy i Johnson. Miarahaba an'i David izahay amin'ny asany manokana ao amin'ny UPS. Nandray fepetra tamim-pahasahiana izy mba hampiakarana ny UPS eo an-tampon'ny indostrian'ny fitaterana, ary nahavita nametraka ny orinasa ho amin'ny hoavy mahomby amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny firongatry ny tambajotran'izao tontolo izao sy ny mpiasa. "
Hoy i David Abney, "Ny UPS dia iray amin'ireo faniriako indrindra amin'ity fiainana ity, ary noho ny UPS dia nanana ny nofinofy amerikana aho. Ireharehako ny nanomana ity orinasa tsara ity nandritra ny 100 taona ho avy, miara-miasa amin'ny fianakaviana UPS. Matoky aho fa ny ekipa mpitantana UPS dia hitondra ny paikadintsika amin'ny ho avy miaraka amin'ireo fahaiza-manao ananany. Fotoana izao hanolorako ny saina. Tena faly aho tamin'ny vaovao momba ny fanendrena an'i Carol; Fantatro fa izy no olona tsara indrindra mitantana an'io orinasa io. Izy dia mpitarika stratejika ary manana eritreritra iray izay mahafantatra ny kolontsaina UPS ary manome lanja tsara ny soatoavina ary manome ny mpanjifa ho laharam-pahamehana indrindra. ”
Niomana ny haka ny seza CEO, i Carol Tomé dia nilaza hoe: “Manantena ny hihaona amin'ny mpanjifanay sy ireo mpandray anjara izahay amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa mpitantana manan-talenta ary mpiasa 495.000 XNUMX ao amin'ny orinasanay ary manatsara bebe kokoa ny tenantsika. Nanao dingana fiovana miavaka i David tao amin'ny UPS; Mikasa ny hanampy olom-baovao aho amin'ny fahombiazany. Raha ny kolontsainan'ny UPS manankarena sy ny fanoloran-tena tsy miova amin'ny soatoaviny dia hanohy ny hitarika ny indostria isika ary hitombo amin'ny mafy orina ny orinasantsika. ”
Carol Tomé, Tale Jeneralin'ny faha-113 an'ny UPS, izay tao anatin'ny tantaran'ny 12 taona, dia efa mpikambana ao amin'ny Birao UPS nanomboka tamin'ny 2003, ary koa filohan'ny Birao Mpanolotsaina. Tomé, izay filoha teo aloha sy CFO tao amin'ny The Home Depot, ilay fivarotana vokatra lehibe indrindra any an-trano any Etazonia, izay sampana 2.300 sy mpiasa 400.000, dia nandray andraikitra tamin'ny tetik'orinasa orinasa, fitantanam-bola ary fampandrosoana, ary nanompo ho CFO nandritra ny 18 taona. Tao anatin'io vanimpotoana io dia nahatonga ny fitomboan'ny vidin'ny tahiry The Home Depot izany tamin'ny 450 isan-jato.
Nandritra ny vanim-potoana nitarika an'i Abney, izay voatendry ho filoha CEO amin'ny taona 2014 ary ho filohan'ny birao tamin'ny taona 2016, UPS;
Ho fanampin'ny fampitomboana ny fidiram-bolany amin'ny 27% ary ny fidiram-bolany netiny eo ho eo amin'ny 50%, dia nampitombo ny fidiram-bolany isaky ny anjara 60% koa izy io.
Miaraka amin'ny fizarana mizara sy mizara indray dia nitondra $ 29 lavitrisa ho an'ireo mpahazo azy.
Tamin'ny fampiharana ny fandaharan'asa fanovana nandritra ny taona naharetan'izy ireo ny laharam-pahamehana stratejika dia nitombo ny fahombiazan'ny fampiasa amerikana tamin'ny taona 2019.
Nampitombo hatrany ny fahaizan'ny tambajotra eran'izao tontolo izao hatrany izy io, nahatratra 2019 tapitrisa ny isa fanaterana fonosana mihoatra ny 32 tapitrisa isan'andro amin'ny taona XNUMX mandritra ny vanim-potoana farany.
Amin'ny alàlan'ny famoahana ny sidina UPS Flight Forward dia nahazo fankatoavana feno ho an'ny orinasam-piaramanidina voalohany mitana drone avy amin'ny FAA.
Nampitombo ny fahasamihafana teo amin'ny orinasa izany tamin'ny fanovana ny rafitry ny Birao mpitantana sy ny ekipa mpitantana senior.
Abney, izay filoha lefitry ny Operations taloha (COO) nanomboka tamin'ny 2007, dia nitantana fizahan-toetra lozisialy, faharetana ary injeniera, ary koa ny ambaratonga rehetra amin'ny tambajotra fitaterana UPS. Talohan'ny asany dia COO, nitarika tetika stratejika izy mba hampitomboana ny lozisialy lozisialy eran-tany amin'ny maha Filohan'ny UPS International. Niditra an-tsehatra amin'ny fahazoana sy fanatanterahana manerantany ihany koa izy nandritra ny asany, toa an'i Coyote, Marken, ny orinasa Fritz, Sonic Air, Stolica, Lynx Express ary Sino-Trans ao Shina. Nanomboka ny asany tao amin'ny UPS tamin'ny 1974 raha nanohy ny fianarany tao amin'ny Oniversite Delta State i Abney dia nanomboka niasa ho mpiandraikitra ny fonosana ao amin'ny trano kely iray any Greenwood.
Muhittin Şimşek ao amin'ny TCDD Management
Fanovana faneva eo amin'ny UN Ro-Ro Management
Nitifitra indray ireo mpamily UPS
Ny UPS dia manitatra ny serivisy amin'ny lamasinina Sino-Europe
Ny UPS dia lasa Brand Logistics tsara indrindra amin'ny fanandraman'ny mpanjifa
Cargo Devi UPS, 125 Voatendry mialoha ny Tesla Electric
Ny UPS dia miditra amin'ny seranam-piaramanidina New Istanbul
Fiovàna eo amin'ny fanatanjahan-tena Ski Palandöken
Fiovana roa manan-danja tao amin'ny làlan'ny lamasinina avo lenta i Bursa
Ministeran'ny Fampandrosoana, Üçkuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Konak) Tram…
Bus sy minibus ao Eskisehir noho ny asa fanitarana tram…
Fiovana mahaliana ao amin'ny tetikasa Tram Line any Eskisehir
'Fiovana mahaliana' ao amin'ny tetikasa Eskisehir Tram line
Fiovan'ny lalana fitateram-bahoaka ao Taksim | Taksim Square
Fiovana amin'ny làlan'ny fitateram-bahoaka ao Taksim
Fomba mipoaka any Metro Istanbul